Akụkọ - Enwere ike ịdebe WPC?
WPC decking bụ mkpụmkpụ maka plastic osisi na ọtụtụ ndị mejupụtara decking, Ọ bụ ihe a na-ewu ewu na ụwa niile. Mgbe anyị na-akọwa decking mejupụtara, anyị na-ekwukarị WPC decking abụghị eserese, ọ dịghị gluu, obere mmezi .Mgbe ahụ enwere ike onye ga-emegharị anya na enwere ike ịse bọọdụ WPC ahụ? , esi agba n'èzí mejupụtara WPC decking?
O doro anya na anyị nwere ike ịse ihe mkpuchi ahụ, ọ nwere ike ịdị ka osisi siri ike ndị ọzọ.Mgbe ụfọdụ anyị chọrọ agba ọzọ ma ọ bụ decking gị mejupụtara na-egosi ụfọdụ ịdalata, mgbe ahụ ọ nwere ike oge iji mee ihe n'aka gị. ụfọdụ agba na ndị ọzọ dị mkpa ngwaọrụ.Mgbe ahụ, anyị nwere ike na-amalite agba anyị n'èzí WPC decking.
Nke mbụ: Wepu ma ọ bụ kpuchie osisi Ọ bụrụ na ị nwere oke ohia na bọọdụ WPC gị, ị ga-eji akwa ma ọ bụ akwa akwa rọba kpuchie ya na ahịhịa ya niile. WPC ụlọ.
Nke abụọ: Hichaa oche gị.omefọdụ bọọdụ WPC na-eji maka onwe gị, ị nwere ike ịsacha WPC decking gị ka ị na-ebucha ka ị na-ete ya. Maka iwepu ebu na ebu, ichoro igwunye ya na abuo mmanya n’ime ya na otu n’ime mmiri n’ime bọket. Sachaa ya nke oma.
Nke ato: Kpoo uzo gi mejuputara ma kpuchie ya. Iji tinye ucha di nma karie, i nwere ike i kpo aja osisi WPC gi ka o ghari na ahihia ka o wee gbachapu ma mee ka ogwe osisi a di nma. Aziza ma saa mmiri ọzọ. Họrọ otu acrylic latex exter primer ma wụba bọket ahụ na akwa ala gị.
Nke anọ: agba gị n'èzí WPC decking.Mgbe primer bụ 100% akọrọ, ị nwere ike wụsa
N'èzí, gbalịa ịhapụ ngwa mbụ ka ọ kpọọ nkụ tupu ị gbakwunye uwe nke abụọ. Oge dị iche dị iche .yabụ ị kwesịrị ịlele akara ngwaahịa maka oge itinye akwa agbadoro.
Na mgbakwunye, kedu agba ị chọrọ, ị na-akwadebe eserese ahụ nke ọma. Obi nwere ike ịnwe ndụ okike karịa na ngwaahịa WPC.
osisi plastic mejupụtara decking, WPC mejupụtara decking, N'èzí WPC decking, WPC decking n'ala, WPC ụlọ, WPC n'èzí decking,